Mitsidika any Indonezia i Clinton · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2009 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Swahili, bahasa Indonesia, English
Tonga tany Indonezia ny sekreteram-panjakana Amerikana Hillary Clinton ny Alarobia lasa teo. Nanamafy ny “andraikitr'i Indonezia izy amin'ny fandraisana an-tànana ny olana amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny fampihorohoroana, ny proteksionisma, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny olana ara-toe-karena.” Indonezia no firenena silamo lehibe indrindra eran-tany ary fahatelo amin'ny demokrasia malalaka indrindra.
Ankoatran'ny fihaonana amin'ny mpitondra any Indonezia dia nanokana fotoana hitsidihana fari-piaraha-monina mahantra tany Jakarta i Clinton. Nipoitra tao amina fandaharana [amin'ny fahitalavitra] ho an'ny tanora koa izy.
Mino ny Everything Indonesia fa manomboka vanim-potoana vaovao eo amin'ny pôlitika ivelan”i Amerika ny fitsidihan'i Clinton an'i Indonezia:
Ambaran'i Mbak Rita fa toa niha-tanora kokoa i Clinton androany:
Taitra tamin'ny hakitroky ny fifamoivoizana tao Jakarta nandritry ny andro nahatongavan'i Clinton i Devi Girsang:
Tao anatina tsikera iray, manontany tena i Therry sao dia nandefa Clinton sandoka ny US:
Tian'i Andreas Harsono hiresaka ny olana momba ny fahafahana ara-pivavahana, ny tsy matymanota, sy ny fanavaozana ny ara-tafika i Clinton mandritra ny fitsidihany:
waxinglyrical: ny sasany nanontany hoe iza i Hillary Clinton??
mirageinblue: nahita an'i hillary clinton aho tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny. milay
oplet: ny Fan Club-an'i Obama dia nikarakara hetsika hanoherana an'i Hillary Clinton tany Jakarta, amin'ny filazana fa tsy matimaty [tara] aminy izy ireo taorian'ireny hazakazaka ho amin'ny fifidiana ho filoham-pirenena ireny.